Madaxweyne Donald Trump oo xil ka qaadiis lagu sameynaya maanta . – iftiin fm
Madaxweyne Donald Trump oo xil ka qaadiis lagu sameynaya maanta .
Saraakiisha Wakiillada Mareykanka ayaa waxaa lagu wadaa in sacadaha inagu soo adaan ay ka doodaan xil-kaqaadista madaxweyne Donald Trump.
Xubnaha Aqalka Wakiillada oo ay aqlabiyaddiisu leeyihiin Dimoqraadiyiinta ayaa qorsheynayaan in ay xil-ka xayuubinta Donald Trump u adeegsan doona qodobka ‘Hurin Rabshado’ kaddib marki Arbacadi hore ay taageerayaashiisa xoog ku galeen xarunta Koongareeska.
← Dowladda mareykanka oo manta soo saartay amar cusub .
Xukumadda Itoobiya oo digniin adag uu dirtay Sudan . →